Neodymium Ring Magnet miaraka amin'ny Zn Plating ho an'ny rindrambaiko fanamafisam-peo, Magnetsan'ny mpandahateny
Mba hahazoana feo tsara avy amin'ny mpandahateny iray, dia andriamby mahery, andramena neodymium, no be mpampiasa. Ny magnetin'ny peratra Neodymium dia manana ny tanjaky ny saha lehibe indrindra amin'ny andriamby maharitra rehetra. Manfuacturer amin'ny fanamafisam-peo dia mampiasa azy io hifanaraka amin'ny mpandahateny amin'ny habeny samihafa ary hahatratrarana karazana kalitaon'ny tonony.
Neodymium Bar Magnet misy Countersunk Holes
Neodymium Countersunk Bar Magnet dia manasongadina tsy fitoviana ambony, mari-pana miasa mitohy avo lenta, ary fanoherana fanoherana tsara. Ny lavaka countersunk dia ampiasaina amin'ny famantsihana ireo lohahevitra.